EFCC:Ọjị Ụzọ Kalụ, ọ bụ Gọvanọ ọzọ ga-eje nga? – hoo!haa!!
EFCC:Ọjị Ụzọ Kalụ, ọ bụ Gọvanọ ọzọ ga-eje nga?
Hmm! A na-ekwu na oke tagburu mmadụ, ngwere chịrị mma gawa ịpị eze. Ka EFCC hụchara na ụlọikpe atụọla madụ abụọ bụbụ Gọvanọ nga,ha eforola ntụtụ taa ma na akwadosi ike ịhụ na Dọkịnta Ọjị Ụzọ Kalụ nke chịburu Abịa Steeti ga ejekwu nga. Ndia bụbu Gọvanọ atụworo nga gụnyere Jọlị Nyame nke Taraba nakwa Joshuwa Dariye nke Plaatu steeti.
Na mbụ, ndi zuru ego Gọọmentị na-abụ ha gbaba n’otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC, a gbaghara ha njọ, EFCC a kwụsịkwa iyi ha egwu. Mana ọ dịzị ka egwu adagharịala, ebe a tụrụ Dariye nga n’agbanyeghi na ọ gbalagara na APC.
N’agbanyeghị na ha emechibuola mkpesa ha wetara n’ihu ụlọikpe Gọọmentị Etiti na Legọsị, ọkaiwu otu EFCC, Rotimi Jekọbs (SAN)sịrị na ha chọrọ ịgbakwụnye ihe na ya n’ihi ihe akaebe ọhụrụ ha nwetakwuru.
Ụlọọrụ EFCC nọrọ n’abalị iri atọ n’otu nke ọnwa ọktoba, afọ 2016 were jiri isi mkpesa(count charge) dị iri atọ n’anọ kpụpụ Kalụ, onye bụbụ kọmishọna na-ahụ maka Okwu Ego n’ọchịchị ya, Ude Udeogo tinyekwara ụlọọrụ Slok Nigeria Limited ụlọikpe.
Ndia a na-ebo ebubo sịkwa na ikpe amaghị ha, e were narakwa n’akaebe.
Otu onye akaebe bụ Chukwuka gwaburu ụlọikpe ahụ na ya ji ọkwa dịka Deputy Director n’ụlọọrụ Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC) ma na-arụkwa dịka onye ome nnyocha na EFCC oge e mere ya bụ mpụ.
Ọ sịrị na site na ime nnyocha ya, o nwetara edemede nnyocha n’aka Mazị Samụel Iheke, onye bụbu Permanent secretary na Mịnistrị na-ahụ maka Ọchịchị Imeobodo nakwa ndi eze nakwa site n’aka Mazị Chinedum Elechi, onye bụbu ọde akwụkwọ otu Association of Local Governments of Nigeria (ALGON) n’Abịa Steeti.
Onye akaebe ahụ kọwara na ndi ọrụ Gọọmenyị Abịa Steeti ahụ gwara ya na ihe e jiri wepụ Nde Naịra iri abụọ n’ise (N26million) n’ọdọ ego nke steeti na ndi ọchịchị ime obodo nwekọtara ọnụ bụ Joint Account Allocation Committee (JAAC) bụ maka idebe obodo ọcha n’Abịa Steeti.
Ndi EFCC na-ebo Kalụ ebubo iji ụlọọrụ ya bụ Slok Nigeria Limited were zupu Narị Nde Naịra abụọ ( N200million) nke o tinyere n’ụlọakụ First Inland Bank ( nke bụzị First City Monument Bank, FCMB) site n’ọnwa Ọgost 2001 ruo n’ọnwa Ọktoba 2005.
Previous Post: Ilu maka di/nwunye
Next Post: STEETI ENUGU KACHAA NWEE UDO NA NAIJIRIYA – Onye isi ndi uwe ojii